Wargeyska L’Equipe oo sharraxay waxa ay kooxda Manchester United la damacsan tahay Paul Pogba – Gool FM
Wargeyska L’Equipe oo sharraxay waxa ay kooxda Manchester United la damacsan tahay Paul Pogba
(Manchester) 07 Sebt 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ciyaaryahankeeda Paul Pogba la damacsan qorshe ay ugu soo bandhigaysa heshiis kordhin.
Red Devils ayaa doonaysa in saxiixeeda rikoorka ah uu waqtigiisa u hibeeyo kooxda oo uu u saxiixo qadaraas cusub oo waqti dheer ah.
Sida uu warinayo Wargeyska L’Equipe kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la xiriirtay wakiilka ciyaaryahan Paul Poba ee Mino Raiola si ay ugala hadlaan qandaraas kordhinta cusub ee laacibka khadka dhexe ah.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa u muuqday mid ka tagaya kooxda Man United suuqii kala iibsiga xiddigaha ee dhawaan xirmay, balse waxa uu baaqi ku sii ahaaday garoonka Old Trafford, waxaana madaxda Red Devils ay rajaynayaan inay ka dhaadhiciyaan laacibkan inuu muddo dheer sii joogayo kooxda.
26-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa haatan waxa uu ku eg yahay xagaaga 2021-ka, haddii uusan u saxiixin heshiis cusub, Man United waxaa lagu qasbi karaa inay iska iibiso dhammaadka xilli ciyaareedkan, si looga fogaado inay ku waayaan xiddigan beeca xorta ah.